China Gorofu Pfeka juzi revarume Male Polo Shirt Pfupi Sleeve Inofema Yekusimudzira polo shati vagadziri nevatengesi | RE-HUO
Gorofu Pfeka juzi revarume Male Polo Shirt Pfupi Sleeve Inopurika elastic mashati ehembe dzevarume
Chigadzirwa Chigadzirwa: Polo shati
Zvinhu: 180gsm 92% polyester 8% spandex
Technics: Chinovhara kudhinda, Kupisa kupisa, Dye sublimation, nezvakarukwa nezvimwewo.
Ruvara: grey, bhuruu, pink, dhamu rebhuruu, pepuru
Saizi: XS / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4xL / 5XL
Kune stock mavara, yedu MOQ ndeye 50 zvidimbu polo shati, uye iwe unogona kusarudza akawanda masayizi.
Hukuru hwese iChina kukura uye hunoyerwa nemaoko saka zvakajairika mamiriro kuva ne 1-2cm kukanganisa renji Kazhinji kutaura China size iri diki pane US kana EURO saizi (Chinese saizi XL = Euro saizi S, Chinese saizi L = Euro saizi XS zvichingodaro)
2.Ndokumbira utarise chiyero chati usati watenga chinhu.
Ndapota cherekedza kuti musiyano wemavara mashoma unofanirwa kugamuchirwa nekuda kwechiedza uye skrini.
Iwe unogona kusarudza imwe kana dzimwe nzira dzokudhinda kuita yako polo shati kuti ive yemafashoni.
Iwe unotumira dhizaini yedu kwatiri uye isu tichaiprinta zvinoenderana nechikumbiro chako, Kana iwe usingazive maitiro ekugadzira polo shati dhizaini, unogona kutitumira logo yako kana zano, uye mugadziri wedu anogona kupedzisa dhizaini yako.
Isu tinopa yakagadziriswa chitaridzi uye tag tag, kugadzira polo shati neyako brand.
Pashure: Best yepamusoro Wholesale mitambo sublimation timu tsika nhabvu yunifomu nhabvu Jersey yakatarwa nhabvu kusakara
Zvadaro: Fashoni Inofurika Yemitambo Pfupi Sleeve Unisex inokurumidza yakaoma t-shirt kudhinda polyester spandex tshirt